Gabriel Karaarslan - Usomabhizinisi kanye umsebenzi e Logistics, wabasunguli nokubambisana umnikazi esikhulu Logistics ngamazwe yinkampani eyaziwa.
Gabriel Karaarslan - umsunguli we-Logistics ezinkulu ubambe inkampani waziwa emhlabeni wonke. Lapho uGabriel yinkampani kanye nabalingani bakhe babe nencenye emsebentini nokuhlinzekwa ezokuthutha, Logistics kanye nezinsizakalo ukudlulisa ngempumelelo. Gabriel Karaarslan oyisakhamuzi Turkey futhi omunye yimpumelelo kakhulu osomabhizinisi Turkish. Kuyaziwa ukuthi lo somabhizinisi wazalwa Okthoba 10, 1976 edolobheni Gerger, esemgwaqweni esifundazweni Adiyyaman.
Karaarslan Gabriel ngo-1994, wangena Istanbul University ubuhlakani komthetho. Ulwazi, okuyinto zazitholakala phakathi neminyaka ukuqeqeshwa kwelinye amanyuvesi ngobukhulu e-Turkey, futhi yaba isisekelo, esangenza ukwakha okwabo, egcwele emangalisayo yimpumelelo ngokuhamba kwesikhathi esikhathini esizayo Dzhabrail Karaarslanu.
Sokuqala inkampani futhi ibhizinisi ukuthuthukiswa sakhe
Ngo-1997, Gabriel esungulwe Logistics inkampani yakhe ngokuhlanganyela abalingani Russian. I geography kwenkampani entsha kwaba sihlanganise indawo ebanzi kakhulu - Russia, e-Asia amazwe aseYurophu futhi amazwe CIS.
Njengoba wazi, okwamanje ULS Global ingenye izinkampani ezinkulu, okubandakanya hhayi kuphela Logistics division, kodwa futhi zokuthutha amayunithi, kanye namasevisi yizimpahla lokudlulisela phambili. ULS Global - inkampani nge idumela emhlabeni wonke, okuyinto Kuyaziwa namuhla kokubili eRussia futhi e-Italy, eJalimane, Finland, Estonia, ngaphezu, China naseKazakhstan. Gabriel iye zikhethwa Karaarslan umsebenzi iyunithi, iqinisekisa izinga air traffic esikuziphathimandla inkampani.
Inzuzo enkulu yale nkampani Kuyaphawuleka ukuthi ukuze sithuthukise ezokuthutha izixhumanisi, kanye ukunciphisa isikhathi ukulethwa kwezimpahla, ukunciphisa izindleko yonke inqubo, futhi ngaphezu kwalokho, amanani omningi osekwenziwe ngempumelelo ukuphathwa ikhasimende. izimpahla Turkish ezilethwa Estonia ngendiza bese iya kulo lonke elaseYurophu futhi Russia.
Kamuva, ngo-2008, Gabriel Karaarslan okuqaliswe yokufuna kuzu Airlines Turkish Airlines. Esikhathini esizayo, inkampani kasomabhizinisi yangasese iqanjwe kabusha ULS Airlines. Airline, wawuqondiswa usomabhizinisi abanolwazi, ngokushesha baqala ukuzuza "isisindo" emakethe, futhi manje, njengoba wazi, unguphathina abathwali izinkampani zamazwe omhlaba ezifana Emirates (UAE), isi-Turkish Airlines (Turkey), Saudia esikhulu kunazo zonke emhlabeni (Saudi Arabia) DHL (eJalimane), and uhlolwe (United States). ULS Airlines Inkampani izinze e Istanbul, futhi isisekelo salo kuyinto enkulu zezindiza ihabhu yezwe - Ataturk Airport.
Karaarslan Gabriel uyindoda yomuzi eyisibonelo yena nomkakhe unezingane ezintathu.
Ufuna ingane lokuvuswa ebuntwaneni ujabule? Funda ukuthi yini okudingeka uyenze
Ginger impande. zokupheka enempilo
Indlela ukukhetha wamafutha kusukela emithanjeni varicose?
Indlela kaNorkhovv yokukhula okukhulayo: ukuzivocavoca. Norbekov Mirzakarim Sanakulovich
Indlela yokwenza elithambile inyama? izindlela eziningana ukuze marinades.
Eye lehla "Optiv": yokusetshenziswa